Lakes nke Tristaina, ihe dị mkpa nke Andorra | Akụkọ Njem
Lakes nke Tristaina, ihe dị mkpa nke Andorra
Enric Gili | | Andorra, Izu ụka, General, Ihe ị ga-ahụ
Taa, aga m agwa gị banyere njem mmụta nke kwesịrị maka onye ọ bụla ma dịrị mba anyị nso, ọkachasị Ọdọ mmiri ndị dị na Tristaina, n’ime ime ebe ugwu Andorra. N'ezie otu n'ime ụzọ ndị kachasị adọrọ mmasị na mba Pyrenees.
Ọdọ mmiri ma ọ bụ circus nke Tristaina bụ set nke Ọdọ mmiri ndị dị na Andorran obodo nke Ordino na ihe dị ka 2300 mita nke elu, ebe Pyrenees kewara mba 3: Andorra, Spain na France.
Isi ọdọ mmiri ndị circus ahụ bụ: ọdọ mbụ (nke kacha nta, ihe dị ka mita 2250 nke elu na nke na-acha anụnụ anụnụ). ọdọ mmiri etiti (onye na-ajụ ihe dị ihe dị ka mita 2300 n'ịdị elu na nke gbara gburugburu) na ọdọ mmiri dị n'elu (nke kachasị n'ime 3, nke agba agba na-acha anụnụ anụnụ, n'ihe dị ka mita 2350 nke elu na gburugburu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2900 mita).
Enwere ike ịme m ụzọ m na ọkara ụbọchị ma ọ bụrụ na anyị ebido n'isi ụtụtụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ndị dị elu dị elu nke circus ahụ.
Njem njem ahụ na-ewere ọnọdụ n'oge niile dị elu karịa mita 2000, n'ihi nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịme ya n'oge ọkọchị. Ihe kariri ọkara nke afọ kpuchie ya kpamkpam, yabụ anyị ga-achọ snows ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ pụrụ iche iji gaa n'okporo ụzọ ma ọ bụrụ na enwere snow. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezigbo nhọrọ iji hụ ya n'oge ọkọchị na udu mmiri mgbe ọdọ mmiri na-ajụ oyi na gburugburu ebe niile bụ snow, n'ọnọdụ abụọ ọmarịcha ọdịdị ala pụrụ iche.
1 Otu esi aga ọdọ mmiri Tristaina?
2 Kedu ihe ị ga-ahụ na ihe ị ga-eme na ọdọ mmiri Tristaina?
Otu esi aga ọdọ mmiri Tristaina?
Getgaru ọdọ mmiri Tristaina Anyị ga-aga n'okporo ụzọ mba CS-380 nke na-eduga na ndagwurugwu nke Ordino Arcalís. Anyị ga-agafe dum Arcalís ebe ruo mgbe anyị ruru fọrọ nke nta ka ndị kasị elu mgbe, kpọmkwem na Clọ nri La Coma, ebe anyị ga-adọba ụgbọala ma jiri ụkwụ gawa ụzọ. Fọdụ ntuziaka na-atụ aro ka ị na-adọba ụgbọala ntakịrị ala ebe enwere ihe ngosi iji bido n'okporo ụzọ, ana m akwado ka ị gafere obere ụgbọ ala gaa n'ụlọ nri wee bido ụzọ ahụ. Ọ dị nnọọ ka ọ mara mma ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịiche ọ bụla belụsọ na na nke mbụ akụkụ izizi nwere ezigbo mkpọda.
Enwere ike iru ụkwụ Circus Tristaina n'ụkwụ.
Ya mere, dị n’azụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ beginsụ na-amalite ụzọ na-aga n’ugwu ahụ nke nta nke nta ọ na-arịgo ruo mgbe ọ ruru obere olu nke meghere nnweta ọdọ mmiri atọ ahụ. Nrịgo mbụ a chọrọ ihe dị ka ọkara elekere.
Ozugbo ebe a bụ ebe anyị nwere ike ikpebi ụzọ anyị ga-eso na ihe ndị anyị chọrọ ịhụ.
Kedu ihe ị ga-ahụ na ihe ị ga-eme na ọdọ mmiri Tristaina?
Njem mmụta m na-akwado iji wee bụrụ:
etiti ọdọ mmiri
ọdọ ka elu
trekking ma ọ bụ hiking na ọdọ elu ebe
ọdọ mmiri dị ala
Ozugbo anyị gafere olu wee gbadata n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ, nke mbụ anyị ga-ezute n'ihu bụ etiti ọdọ mmiri, anyị ga-ewe ihe dị ka nkeji iri anọ na ise n'ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ihe dịka 45 site n'olu. Nwere ike ịgagharị ọdọ mmiri ma n’aka nri ma n’aka ekpe.
Nkeji ole na ole ka anyi gachara rue elu mmiri, nke kachasị ukwuu. Ọdọ mmiri 3 dị nso. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya isoro ya gaa n'akụkụ aka nri, ụzọ dị n'aka ekpe ruru ebe mkpọda ugwu ahụ dị oke elu.
N'oge ọkọchị, a na-ahapụ ya ka ọ saa ahụ n'ọdọ mmiri a. O doro anya na ọ bụ naanị ndị nwere obi ike ga-eme ya, dịka ọ bụ ọdọ mmiri nwere ice. Ọkara afọ na-ajụ oyi na ọkara otu afọ ọ bụghị ma ọ na-enwe oke okpomọkụ mmiri.
Ozugbo ekiri ma nwee obi ụtọ n'Ọdọ Mmiri Elu m Ekwadoro m ka ị were ụzọ aka nri gị nke na-agbago ugwu na-eso ụzọ obere iyi. Ọ bụ ugwu dị elu ma na-erughị ọkara otu awa anyị ga-erute n'olu ọzọ (nke dị ugbu a n'ihe dị ka 2500 mita nke elu) ebe anyị nwere ike ikpebi ma anyị ga-aga n'ihu na-arịgo otu n'ime ọnụ ọnụ Tristaina ma ọ bụ iji mechaa ịrịgo ahụ na nwee ọmarịcha echiche nke ndagwurugwu ahụ dum na akụkụ nke Andorra nke oge a na-enye anyị.
Ekpebiri m ka m ghara ịga n'ihu na-atụgharị uche na Tristaina niile site na ebe a, amaghị m ma ọ bara uru ịrị otu n'ime ọnụ ọnụ ugwu dị n'akụkụ nke a.
Ozugbo anyị mechara akụkụ a nke njem ahụ, anyị ga-enwe ike ịgbadata otu ụzọ ahụ kama kama ịtụgharị na ọdọ mmiri nke elu Aga m aga ogologo ọdọ mmiri dị ala. Mgbe ọkara otu awa nke mgbago anyị ga-erute n'elu ọdọ mmiri ebe anyị nwere ike ịhụ ya site na nnukwu ịdị elu. Site n'ebe ahụ ị nwekwara ike ịhụ ndagwurugwu Ordino dum nke gbadara El Serrat na obodo ndị ọzọ Andorran.
Dịka m gwara gị, nke a bụ nke pekarịrị na 3, na nkeji ole na ole ị nwere ike ịgagharị.
N'ikpeazụ, anyị laghachiri n'obere olu mbụ (ihe dị ka minit 15 site na ọdọ mmiri dị ala) wee si ebe ahụ gbadata ọzọ n'ụlọ nri La Coma.
Fans nke Tristaina makwaara ndị na-akụ azụ. A na-ahapụ ya na circus niile n'oge ọ bụla n'afọ ị ga-ahụ ndị mmadụ na-ekpori ndụ n'ịkụ azụ.
Ọ bụ ụzọ dị mfe dị mfe n'ozuzu ya, gosipụtara nke ọma ma dịkwa mfe ịnweta, na-enye ohere otutu ọdịiche dịka ụtọ nke ugwu ọ bụla. Ọ dabara adaba maka ndị hụrụ okike n'anya na ndị chọrọ ịnụ ụtọ Andorra site n'echiche dị iche karịa mba Pyrenees nwere ike anyị nweburu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Andorra » Lakes nke Tristaina, ihe dị mkpa nke Andorra
Oke osimiri kacha mma iri na Brazil
Caliente Caribe, ebe a na-eme ememe ịgba ọtọ na Dominican Republic